‘पार्टी र संसद सिध्याउन खोज्ने ओलीलाई कारबाही हुनुपर्छ’
नेकपा (एमाले)ले पार्टी निर्देशन विपरित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । एमालेको १० औं केन्द्रीय समिति बैठकले माधव नेपालसहितका २२ सांसदलाई कारबाही प्रक्रियाको सुरुवात स्वरुप स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । एमालेको बहुमत पक्षले गरेको यस्तो निर्णयका बारेमा हामीले पार्टी निर्देशन विपरित देउवाको पक्षमा मत दिने सांसद मध्येकी एक पार्वती विशंन्केलाई केहि जिज्ञासा राखेका छौं । एमाले नेतृ एवं सांसद पार्वती विशन्केसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरुले पार्टी निर्देशन विपरित प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा मत दिनुभयो । पार्टी निर्णय लत्याउँदै मत किन र केकालागि दिनुभएको ?
त्यहि पार्टीको सांसद हुने अनि त्यही पार्टीको निर्देशन विपरित मतदान गर्ने, यो मिल्ने विषय हो र ?
हो तपाईंले उठाएको प्रश्न एउटा हिसाबले सहि छ । तर, बुझ्न आवश्यक छ, पार्टी भनेको कसैको पेवा वा विर्ता होइन् । यो सबैको योगदानबाट निर्माण भएको संस्था हो । त्यो संस्थाभित्र कसैले आफ्नो विवेक गुमाउनु पर्ने वा स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्ने भन्ने हुन्न ।
पार्टी र पार्टी अध्यक्षको निर्णयको कुनै महत्व हुँदैन् ? के सबै नेताहरु पार्टीको विधि र पद्धतिमा चल्नु पर्दैन् ?
एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले तपाईंहरुमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो सन्दर्भमा तपाईंहरुलाई कारबाही पनि होला । यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
तपाईंहरु मध्ये कतिपयले तत्कालिन समय ओलीको कदमलाई स्वागत गर्दै वैशाख २७ मा मत दिन जानुभएको थियो । अहिले आएर मत परिवर्तन गर्नुभएको छ । कतिपयले प्रश्न उठाउँछन्, के जवाफ दिनुहुन्छ ?